Lasopy malagasy - Lasopy gasy - Nahandro malagasy
par Tatiana Razanadraibe	 22 mai 2016
Lasopy malagasy, hoentina hanafanana vatana amin’ny izao ririnina izao. Mitovitovy amin’ilay recette soupe chinoise gasy ihany.
Fotoana ikarakarana azy: 15 mn
nofo kisoa, akoho, nofon-ken’omby,
Fikarakarana Lasopy malagasy
Andrahoina amin’ny rano betsaka ny paty gasy. Tsy atao malemy be ary tsy ariana ny rano nandrahoina azy.
Asiana gingembre misimisy sy sel ilay rano nandrahoina ny paty dia avela hangotraka tsara.
Endasina ny nofo-kisoa na omby na akoho nasiana sel sy poivre dia arotsaka anaty ron-dasopy.
Manao omelette dia tetehina lavalava, toy izay koa ny champignons noirs ary arotsaka ao anaty ro. Avela hiketrika kely.
Rehefa hihinana dia arotsaka ny paty, rarahana coriandre sy ciboulette.
Raha toa ka misy fofona otrany bouna zay ilay paty gasy dia ity misy astuce kely analana izany: tsy tonga de andraoina fa velarina ambony sahafa dia atanina andro na avela azondrivotra vetivety de tsy manin tsony. Marihina fa ilay farine ampiasaina amin’ilay paty gasy no mahatonga zany.
fanaovana lasopy, gouter malagasy, lasopy madagascar, recette lasopy gasy, recette soupe chinoise gasy
Article précédent : Chou farci
Foire de l’élevage et de la production animale à MadagascarArticle suivant :